Chasa Sassalba, indawo yokulala nesidlo sasekuseni 65.- umuntu ngamunye - I-Airbnb
Chasa Sassalba, indawo yokulala nesidlo sasekuseni 65.- umuntu ngamunye
Val Müstair, Graubünden, i-Switzerland
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Anna Maria
U-Anna Maria Ungumbungazi ovelele
Ngiqasha amagumbi anesidlo sasekuseni kanye negumbi lokugezela elihlanganyelwayo endlini yangaphambili yasepulazini. Amakamelo enziwe nge-Swiss stone pine futhi aqinisekisa ukulala okumangalisayo, okujulile. Ngiyazisa ukusimama, ulala ngendlela engokwemvelo futhi udla ngokwemvelo ngangokunokwenzeka. Kukhona neyogathi yesoya noma ubisi lwe-alimondi ngokucelwa. Amaqanda emvelo avela kumlimi ongumakhelwane wethu. Ushizi uvela ku-alp. Ake umangale!
I-Lü iyidolobhana elincane elisezintabeni ethafeni elishiswe ilanga phezulu ngaphezu kweVal Müstair. Noma ubani othatha indlela ekhuphukela lapha ngaphansi kwezinyawo noma amabhayisikili akhe uzohlangana ne-oasis ezolile ekude nejubane elimatasa lempilo yansuku zonke, phakathi nepharadesi lokuqwala izintaba.
I-Val Müstair ibhekwa njengenye yezigodi zezintaba ezinhle kakhulu eSwitzerland, enendawo yemvelo egcinwe kahle kanye namadolobhana agcine isimo sawo amashumi eminyaka. U-Lü mncane kunabo bonke futhi ngesikhathi esifanayo uphakeme kakhulu. Ukuphakama okuziqhenyayo kwe-1920 m ngaphezu kwezinga lolwandle. I-M. yenza i-Lü ibe enye yezindawo eziphakeme kakhulu ezihlalwa unyaka wonke eYurophu. Isithombe sesigodi esivumelanayo sakhiwe isonto lenkathi ephakathi.
Umakhelwane wethu oseduze ungumlimi wezinto eziphilayo. Lapha kulapho amaqanda akho ebhulakufesi aqhamuka khona ...
Ibungazwe ngu-Anna Maria
Ich bin eine naturverbundene kontaktfreudige Person, die sich gerne mit Naturheilkunde befasst und sehr gerne liest, wandert und sich kreativ austobt.
Uma ngikwazi, ngizoba lapho ngesidlo sasekuseni. Uma kungenjalo yonke into isilungile futhi ungazisiza noma nini lapho ufuna, kodwa kufanele ube nesidlo sasekuseni ngo-11 a.m. kamuva. Ngesicelo, ngingakwazi ukukulungiselela ukudla kwasemini okupakishiwe ozohamba ngaso futhi, uma nginesikhathi, ngiyajabula ukukunikeza isifundo se-alphorn. Ngiphinde nginikele ngohambo lwemifino emincane ngenkokhiso ekhethekile.
Uma ngikwazi, ngizoba lapho ngesidlo sasekuseni. Uma kungenjalo yonke into isilungile futhi ungazisiza noma nini lapho ufuna, kodwa kufanele ube nesidlo sasekuseni ngo-11 a.m. kamu…
UAnna Maria Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Val Müstair namaphethelo